Pablo Sarabia oo iska diiday inuu u soo dhaqaaqo kooxda Chelsea – Gool FM
Pablo Sarabia oo iska diiday inuu u soo dhaqaaqo kooxda Chelsea
(London) 9 March 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Sevilla ee Pablo Sarabia ayaa la soo warinayaa inuu hoos u dhigay oo iska diiday fursad uu ugu soo biiri lahaa naadiga Chelsea ee ka dhisan Waddanka Ingiriiska suuqa kala iibsiga bishii Janaayo.
Sarabia, kaasoo kaga soo biiray Sevilla kooxda Getafe xagaagii 2016-kii ayaa bandhig cajiib ah sameynaya xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyey 19-gool isagoo dhiibay ama caawiyey 13-gool oo kale 43 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Sida ay warinayso Jariiradda Mundo Deportivo, kooxda Chelsea ayaa isku dayday inay 26-sano jirkaan keento garoonka Stamford Bridge ee Galbeedka Magaalada London intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga jilaalka, laakiin xiddiga reer Spain ayaa iska diiday dalabkaas.
Sarabia, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayey inuu u dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain ayaa eegi doona inta uu ka dhacayo qandaraaskiisa uu ku joogo garoonka Estadio Ramon oo ku eg illaa dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Spain ee da’doodu ka hoosayso 21-jirrada ayaa dhaliyey 39-gool, waxaana uu dhiibay 35-gool oo kale 142 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Sevilla tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga Getafe xagaagii 2016-kii.
Paris Saint-Germain oo aan ka rajo dhigin inay la soo wareegto xiddig ka tirsan koox ka dhisan dalka Spain